WHITE-NERVE GUINEA FOWL: SHARAX, SAWIR, CONTENT, DARYEELKA IYO QUUDINTA - BEERAHA DIGAAGA
Beeraha guinea ee hargabku waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee beeraha digaaga casriga ah. Gawaarida Guinea waxay hoos u dhigayaan inay daryeelaan, adkaysi u yeeshaan cudurrada waxayna leeyihiin faa'iidooyin badan oo digaagga ah: Bisaylka hore, hilibka dhalidda ilaa 85% oo ka sii fiicnaanaya nafaqooyinka ukumaha. Kalluumaysatadu si joogta ah ayey u shaqeynayaan si ay u wanaajiyaan tayada iyo taranta naasaha cusub.
Naqshadaha Cagaaran ee Nawaaxiga Guinea waxaa abuuray Machadka Cilmi-baarista iyo Tiknoolojiyada ee Digaagga ee 1970-kii. Kooxaha taranka ayaa waxaa abuuray dhiig lagu shubo lafdhabarta caag ah oo caan ah oo reer Mosel ah oo loo yaqaan 'fowl' goosad ah. Sidaas awgeed xariiq ayaa lagu sameeyay baal cad oo ku yaal laabta. Maanta koox kooxeed ayaa 3 xariiq oo cusub ku leh guryaha kala duwan.
Qeexida iyo muuqaalka
Dibedda haadii guinea ee madax bannaan:
Shimbiraha qiyaasta caadiga ah. Dhererka jirka wuxuu gaari karaa 1.5 m. Jirka jirka oo weyn oo leh meel jidhka ah, sida kuwa cawliga leh. Lugaha yaryar, xooggan, aan la riixin. Daboolka lama sheegin. Muruqyada murqaha dumarka ayaa si fiican loo horumariyaa. Kelyaha laabta ee labka ah ayaa lagu tilmaamaa;
dhuujiyo qaro weyn. Midabada midabka ah ee la googooyey ayaa leh xajin cad oo ku jirta laabta. Kala duwanaanshaha midabka midabka ah - laga bilaabo cawl mugdi ah ilaa iftiin leh cagaar jaale ah;
madaxa waa yar yahay, oo lagu qurxiyo lafaha cas. Lugaha iyo dhuuban jilicsan. Qoorta waxaa lagu dhajiyay baaldi qaro weyn.
Waa muhiim! Aamusnaanta haadda guinea waa calaamad cudurka ah, sababtoo ah xitaa gobolka aamusnaanta iyo habeenkii, shimbiraha ka dhigo cooing iyo dhawaaqyo kale.
Sifooyinka waxtar leh
Wax soo saarka beerka:
miisaanka ragga waa 1.6-1.75 kg, miisaanka dheddiguna waa 1.9-2.1 kg;
badeecada hilibka ayaa gaareysa 85% oo ka soo jeeda meydka;
Soosaarka ukunta - 135-140 ukumaha sanadkiiba;
miisaanka ukunta - 44-46 g;
midabka jilicsan - laga bilaabo iftiinka jaalaha ah ilaa cagaarka;
bacriminta ukunta - 91-94%;
xoqidda ukunta - 72%;
saamiga badbaadada ee saamiyada dhallinyarada - 98%.
Gawaarida Guinea waxay ku noolaan karaan xaalad kasta - waxay si sahal ah u qaadan karaan, waxay cuni karaan cunto kasta waxayna gabi ahaanba aan la xakameyn karin. Laakiin haddii beerashada ay ujeeddo wax-soo-saar leh, markaa waa inaad raacdaa shuruudaha qaarkood ee xaaladaha xabsiga.
Shimbiraha waxay u baahan yihiin 1 lab oo dheddig ah 5-6 dheddig - tani waxay bixin doontaa boqolkiiba sare ee bacriminta ukumaha. Waxaa muhiim ah in la xasuusto in duurjoogta, ragga ay aad u xulasho, iyo kordhinta tirada haweenka waxay yareeyaan suurtagalnimada bacriminta.
Haddii shimbiraha aan la wada kicin, markaa wakiilada nuucyada kala duwan waa in si gooni ah loo hayaa, sababtoo ah waxay isku dhacaan dhulalka, cuntada, iwm.
Shimbiraha waxay u baahan yihiin guri iyo socod. Socodka, shimbiraha guinea ma jebin dhulka, taas oo aad ugu sahlan sariiraha. Gaar ahaan si fiican waxay la shaqeeyaan sariiraha barafka, ururinta lamid ah Colorado.
Waa muhiim! Ha isticmaalin sida balka boodhka ah ee sariirta: suufka joogtada ah ee ku jira iyaga ayaa ku xiran kara xajmiga.
Si ay shimbiraha u noqdaan kuwo caafimaad qaba, waxaa lagama maarmaan ah in si habboon loo qalabeeyo guriga. Diirada saar talooyinka soo socda:
Gawaarida Guinea waxay u adkeysanayaan heerkulka hooseeya, laakiin aad bay u nugul yihiin qoraalada. Sidaa darteed, shuruudda ugu weyn ee guriga waa maqnaanshaha khilaafyada. Tan iyo shimbiraha waa weyn, ka dibna ugu yaraan hal shakhsi waa in la siiyaa ugu yaraan 0.5 mitir labajibbaaran. m square. Xayawaanka qolka leh ee kuleylka ah ayaa noqon doona mid aan loo goyn karin shimbiraha xilliga jiilaalka.
Qolka waa inuu ahaadaa xirmo: qaybta jajabka - 4x5 cm, masaafada u dhaxaysa qaansooyinka - 30-40 cm, dhererka meelaynta - 40 cm dhulka. Cabbirka hoolka - Maaha wax ka yar 40x30x30 cm. Abuuritaanka dhowr meelood oo yaryar, laakin jilicsanaantu waxay noqon doontaa mid aad u wanaagsan.
Dabaqa ayaa la daboolay qashin laga bilaabo shimbir, hay, ciid iyo caws. Miisaanka dhererka - 20 cm Qashinka waxaa la beddelaa ugu yaraan hal mar bishii.
Xilliga jiilaalka, waxay u baahan doonaan iftiin macmal ah si loo ilaaliyo wax soo saarka ukunta. Waa in la kordhiyaa saacadaha iftiinka saacadaha 12-14 saacadood maalintii. Heerkulka hawada ugu fiican ee haraaga guinea waa + 10 ... +15 ° C
Guriga waa inuu ahaadaa daaqaddhinaca koonfureed. Wixii shimbiraha horumarinta wanaagsan waxay u baahan yihiin qoraxda.
Quudinta xoolaha waa inay ahaataa 3-4 jeer maalintii. Sidaa darteed, tirada nuujiyayaasha waa inay noqdaan ugu yaraan 1 qof 5 qof. Haddii hunqaha guinea koray baqashada, ka dibna mid kasta waa inuu lahaadaa quudkiisa gaarka ah iyo cabista bowdada.
Nadiifinta guriga waa la fuliyaa iyadoo loo eegayo qaabka soo socda:
dhaqidda iyo ka shaqeynta cabitaanka iyo quudinta - toddobaadle;
digaagga guriga daadin - mar bishii.
Ma taqaanaa? Haddii cayayaanka cayayaanka ee noocyada qaarkood ay aad u badan yihiin gobolka, ka dibna beeralayda ayaa quudinta guinea dhowr ah cayayaankaas maalin kasta. Waxay caadeysteen dhadhanka iyo muuqaalka, shimbirta lafteeda waxay heli doontaa iyaga. Habkan ilaalinta sariiraha ayaa bixin doona dalag cagaaran oo wanaagsan.
Dayrka socodka waa in si wanaagsan loo iftiimaa, sababtoo ah shimbiruhu aad ayay u jecel yihiin qorraxda. Goobtu waa inay noqotaa geedo ama cawska dheer - duurjoogta, waxay ku nool yihiin meelo yar yar iyo xoortay. Xilliga jiilaalka, suufka waxaa lagu rusheeyaa peat, taas oo ka hortagi doonta barafka, iyo caws, sidaas darteed boogaha aan la qaboojinin shimbiraha. Xilliga xagaaga, haraaga guinea wuxuu awoodaa in uu helo 70% raasumaalka loogu talagalay socodka. Waxaa muhiim ah in shimbiruhu ay helaan biyo nadiif ah oo nadiif ah. Haddii socodku uu yahay dhul bilaash ah oo aan dusha laga saarin, markaa haadda guinea wuxuu socon karaa illaa 3 km, laakiin waxay weli ku laabtaan guriga habeenkii.
Baro wax badan oo ku saabsan dayactirka jiilaalka ee haadda guinea.
Raashinka shimbiraha guinea waxay la mid yihiin raashinka broiler waxayna ka kooban yihiin:
cagaarka - cusub iyo qaabka cawska cagaaran xilliga qaboobaha;
xoolaha - hilibka iyo lafaha cuntada, waxyaabaha caanaha laga sameeyo.
Laga soo bilaabo dalaggu waxay doorbidaan qamadi iyo hadhuudh. Shimbiraha ayaa aad u dooranaya inay cunaan cunto, waxa aysan jeclayn, waxay ku jiri doonaan naas-nuujiyeyaasha, waana la cuni doonaa. Tilmaamahan wuxuu ka caawiyaa beeralayda inay hagaajiyaan cuntada xayawaanka.
Ma taqaanaa? Magaca sayniska ee guinkaa guinea waa Numida meleagris. Halyo Giriig ah ayaa sharaxaya in haadda guinea ay yihiin walaalaha reer Tsarevich Meleager. Dhibcaha cad ee roogga ayaa ah ilmo-yaryar oo ay ku dhufteen gabadha walaalaha ah.
Qiyaasta cuntada ku jirta cuntada:
badarka - 50%;
khudaarta iyo cagaarka - 45%;
dheellitirka macdanta - 5%.
Heerka quudinta maalinlaha ma aha wax ka yar 200-250 g, oo cagaarka aan ka yarayn 120 g. Mashiinka qoyan waxaa lagu diyaariyaa caanaha ama salmon. Sii qaybo yaryar 1-2 jeer maalintii. Qodobka macdanta ee ugu muhiimsan waa muraayado, jeeso, milix. Taangiyada gaar ah waa in had iyo jeer ay noqoto midabyo ama qolof ah.
Faa'iidooyinka Zagorsk ee caddaanka ah:
Tilmaamo wax soosaaraya: beeralayda waxaa la siiyaa ukumo badan oo sanadka oo dhan ah;
miisaan degdeg ah oo degdeg ah - ilaa 70 cisho, miisaanku wuxuu gaaraa 1 kg;
Tilmaamayaasha waxtarka leh ee sareeya ee dhaqaalaha: qiimaha waxaa lagu qiyaasaa 3 kg oo cunto ah 1 kg oo kor u kaca miisaanka nool;
boqolkiiba sagaashan ukumo badan;
marar dhif ah ayay jiradaan mana aha kuwo u nugul "cudur diga" caadi ah;
u dulqaad heer kul hoose si fiican;
si fiican u burburiyaan cayayaanka.
Baro noocyada iyo dabeecada haadda guinea.
lagaa qaadi karaa meel kasta;
xasilooni daro iyo cabsi.
Video: Caleenta Zagoriyan ah oo caleemo qaniin ah
Nagaarka cad ee Zagorsky waa fowlada guinea ee aan jeclaa. Sannadkan, digaag ayaa la ii beddelay, maadaama ay ka dillaacaan laga bilaabo guga ilaa October maalin kasta iyada oo aan la joojin. Ukumaha ayaa ah midka labaad, ka dib digaagduur, waxaa la keydiyaa waqti dheer waana adag tahay in la garaaco.
Waxaa jira, dabcan, daqiiqado wanaagsan oo ka mid ah carqaladaha digaaga ka badan kuwa xun, sidaas korinta haadda guinea waxay noqon kartaa waxqabad faa'iido leh. Daryeelka habboon ee dayactirka iyo dayactirka wuxuu siin doonaa beeraleyda hilibka diirran iyo ukunta caafimaad leh.